Diatomite kilasy sakafo, Diatomite divay, vovoka Diatomite any Sina - Yuantong
Fitrandrahana, famokarana, varotra, fikarohana ary fampandrosoana
Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. miorina ao Baishan, faritany Jiling, izay misy diatomita avo lenta indrindra any Shina na dia any Azia aza, dia manana sampana 10, 25km2 amin'ny velaran-tany fitrandrahana, faritra fitadiavana 54 km2, diatomite mihoatra ny 100 tapitrisa taonina tahiry izay mitahiry mihoatra ny 75% amin'ireo tahiry voaporofo ao Shina. Manana tsipika famokarana 14 diatomite isan-karazany izahay, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 150 000 taonina isan-taona.
Fitrandrahana diatomita avo indrindra sy teknolojia famokarana mandroso miaraka amina patanty.
Manaraka hatrany ny tanjona "mpanjifa voalohany", mazoto izahay manome ny mpanjifa vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny serivisy sy torohevitra ara-teknika mety sy mieritreritra.
Ny foibe teknolojia an'ny Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. dia manana mpiasa 42 ankehitriny, ary manana teknisiana matihanina 18 izay miroso amin'ny fampandrosoana sy ny fikarohana ny tany diatomaceous
Ho fanampin'izany, nahazo ISO 9 0 0 0, Halal, Kosher, rafitra fitantanana fiarovana ara-tsakafo, rafitra fitantanana kalitao, taratasy fanamarinana fahazoan-dàlana hamokatra sakafo.
Sina sy Azia no manana tahiry lehibe indrindra amin'ny mpamokatra diatomite isan-karazany
Fananganana tamin'ny 2007
ny anjaran'ny tsena dia 60% kokoa
Ny haitao mandroso indrindra, ny anjaran'ny tsena avo indrindra
Ny "Fihaonamben'ny indostria mineraly tsy metaly metaly sy fampiratiana" 2020 izay natolotry ny fikambanan'ny indostria mineraly tsy metaly dia natao tao Zhengzhou, Henan ny 11 hatramin'ny 12 novambra.
Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny ...
Mifanome tanana handresy ny ady amin'ny epid ...